Chelsea oo 48-da Saac Ee Soo Socota Xaqiijin Doonta Helitaanka Cahil
Monday January 09, 2012 - 19:27:51 in Maqaallo by Super Admin
Gary Cahill ayaa laga yaabaa inuu noqdo ciyaaryahan Chelsea maalinta axada, sida laga soo xigtay macalinka kooxda Bolton Owen Coyle.
Gary Cahill ayaa laga yaabaa inuu noqdo ciyaaryahan Chelsea maalinta axada, sida laga soo xigtay macalinka kooxda Bolton Owen Coyle. Labada kooxood ayaa ka heshiiyay lacagta ciyaaryahanka todobaadkii hore, lakiin heshiiska Chelsea iyo Cahill ayaa adkaaday, iyadoo lagu soo waramayo inuu dalbaday mushahar gaaraya 120 kun ginni todobaadkii. Cahill ayaa sii joogay kooxdiisa waxaana uu ciyaaray kulamadii Wolves iyo Everton.
Waxaa la nasasiin doonaa kulanka maanta ay la ciyaarayaan Macclesfield ee wareega 3aad ee koobka FA Cup, inkastoo uu Coyle sheegay inay nasasiino ka tahay hadana waxaa la leeyahay Cahill kulankiisii ugu danbeeyay ee Bolton waxa uu ciyaaray arbacadii markaasoo uu goolka guusha ka dhaliyay kooxda Everton.
Coyle ayaa u sheegay suxufiyiinta: “Gary Cahill waxa uu ka mid ahaan doonaa ciyaartoyda seegaya kulankaan, shaqana kuma lahan arimaha socda ee ku aadan Chelsea. Waa la nasasiinayaa madaama kulamo badan uu soo ciyaaray”
“Hadii aan ka hadlo arinta saxiixiisa, waxa ay ila tahay inuu jiro fursad lagu soo gabagabeyn doono dhamaadka isbuucaan. Waa halka aan ka joogno arinta, lakiin qeyb kama ahi wadahadalada u dhaxeeya Chelsea iyo wakiilada ciyaaryahanka”.